Ungayazi kanjani indawo yokugcina ye-iPhone yakho ngaphandle kwebhethri | Izindaba ze-IPhone
Ungayazi kanjani indawo yokugcina ye-iPhone yakho, noma ngabe iphela ngebhethri
U-Ignacio Sala | | Okokufundisa namanyuwali
I kungenzeka thola iselula yethu Ukusebenzisa umsebenzi we-Find my iPhone kungasikhipha ezinkingeni ezingaphezu kweyodwa. Uma kwenzeka kwebiwa, ukulahleka noma ukwazi ukuma kwenye idivayisi, ukufinyelela endaweni yayo kuzosisiza ukuyibuyisela futhi sazi ukuthi ikuphi.
Ukwazi indawo ngqo yedivayisi ye-iOS, kuyadingeka ukuthi inebhethri elizokwazi ukuthumela isikhundla ngesikhathi sangempela. Ngokusobala, uma uphelelwa yibhethri, ukusebenzisa umsebenzi we-Find My iPhone kuzobhebhethekisa isimo nakakhulu, ngakho-ke i-iOS inikeza ithuba lokuthumela indawo yokugcina yedivayisi ukuze ihlale ifinyeleleka ngisho ne-terminal isivele icishiwe.
1 Vula ukuthumela indawo yokugcina ye-iPhone
2 Ungasibona kanjani isikhundla sokugcina se-iPhone
2.1 Ngohlelo lokusebenza lwe-Apple Search
3 Ukulinganiselwa kwalesi sici
4 Uyayibona indawo yokugcina ye-iPhone enikwe amandla?
5 Ngingayithola i-iPhone yami noma icishiwe? Nge-iOS 13 uma kungenzeka
5.1 Isebenza kanjani i- "Thola Okungaxhunyiwe ku-inthanethi"
Vula ukuthumela indawo yokugcina ye-iPhone
Ngokuvamile, njalo lapho sithenga i-iPhone entsha noma sibuyisela idivayisi yethu ukufaka inguqulo entsha ye-iOS, idivayisi yethu khanyisa i-Find My iPhone, umsebenzi esingawenza usebenze nganoma isiphi isikhathi ngokuya ngezidingo zethu.
Noma kunjalo, umsebenzi osivumela ukuthi sazi indawo ye-iPhone yethu lapho iphelelwa ibhethri ayenziwanga isebenze ngokuzenzakalela yize itholakala esigabeni esifanayo naleso esivumela ukuthi sikuthole nganoma yisiphi isikhathi.
Uma sifuna i-iPhone yethu Thumela indawo okuyo ngaphambi kokuthi ibhethri lakho liphele Kumele silandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Okokuqala, siya kuzinketho zokumisa ze-iOS ngokusebenzisa Izilungiselelo.
Ngaphakathi kwezilungiselelo, chofoza ku i-akhawunti yethu ye-iCloud, ivela phezulu kwimenyu.
Ngemuva kwalokho sibheka inketho Sesha i-iPhone yami futhi sasebenzisa inkinobho Thumela indawo yokugcina.
Ungasibona kanjani isikhundla sokugcina se-iPhone
Ukuze ufinyelele kokubili indawo yamanje yedivayisi yethu neyokugcina ebhalisiwe ngaphambi kokuphela kwebhethri, uma sisebenzise lo msebenzi, kuchazwe esigabeni esedlule, sinezinto ezimbili esingakhetha kuzo.
Ngohlelo lokusebenza lwe-Apple Search
Uhlelo lokusebenza lokusesha olutholakala ku-App Store luyasivumela, uma sesifake imininingwane ye-akhawunti yethu ye-iCloud yazi indawo yedivayisi yethu ngaleso sikhathi lapho ivuliwe noma yazi indawo yokugcina uma iphelelwe yibhethri.
Uma ngabe idivayisi ingenawo umsebenzi we-Find my iPhone ocushiwe, igama ledivayisi kuphela elizokhonjiswa kanye nombhalo Ngaphandle kokuxhumeka. Uma ingenalo ibhethri, izosikhombisa umbhalo Indawo yokugcina eduze kwegama ledivayisi.
Sesha i-iPhone yamiMahhala
Uma ngabe idivayisi yakho iphethwe yi-iOS 13, asikho isidingo sokulanda uhlelo lokusebenza i-Find My iPhoneNjengoba i-Apple ikufake ngokwendabuko kuwo wonke amadivayisi ahambisana nenguqulo yeshumi nantathu ye-iOS. Esikhundleni sokubizwa ngokuthi Thola i-iPhone yami ibizwa Sesha
Uma singenayo enye idivayisi ye-Apple, kungaba i-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch, i-Apple yenza ukuthi sitholakale kuwebhusayithi ye-iCloud.com. Ngale webhusayithi, singakwazi finyelela indawo yawo wonke amadivayisi wethu ukusebenzisa umsebenzi we-Find.
Lo msebenzi uzosikhombisa wonke amadivayisi ahlotshaniswa ne-akhawunti yethu kanye nendawo yakho yamanje noma yokugcina erekhodiwe ngaphambi kokuphela kwebhethri noma ukucishwa ngedivayisi etholakele / eyebiwe.
Ukulinganiselwa kwalesi sici
Ukuze sikwazi ukujabulela lo msebenzi omuhle we-iOS osivumela ukuthi sazi indawo yedivayisi yethu uma silahlekelwe umkhondo wayo, kunesidingo esisodwa kuphela: uthole i-iPhone yami inikwe amandla kudivayisi.
Uma singawenzi lo msebenzi usebenze, akunakwenzeka ukulandela yendawo okukhona kuyo i-terminal yethu, ngoba ayikwazi ukwenziwa isebenze kude, umkhawulo okufanele utholakale ukuze unikeze isandla kubasebenzisi abangenalwazi.
Uyayibona indawo yokugcina ye-iPhone enikwe amandla?
Uma i-iPhone yethu iphelelwe yibhethri noma icishiwe ngesandla, insiza yendawo yakwa-Apple ikubheka ngendlela efanayo, ngakho-ke uma kungenzeka yazi indawo yesiginali ngaphambi kokuthi icishiwe. Kepha-ke, konke kuncike ekutheni silahlekelwe yiphi ithrekhi ngaye.
Uma siyishiye ikhohliwe endaweni yokudlela noma esitolo, kungenzeka ukuthi abaphathi bayicishe belinde umnikazi ofanele ukuthi abuye, selokhu avinjelwa akekho omunye umuntu ongasifinyelela.
Ngingayithola i-iPhone yami noma icishiwe? Nge-iOS 13 uma kungenzeka
Ukwenza kusebenze i- "Thola ungaxhunyiwe ku-inthanethi" kutholakala kuphela kumadivayisi aphethwe i-iOS 13 noma ngaphezulu
Okokuqala, kufanele sicabangele uhlobo lohlelo lokusebenza olulawulwa yidivayisi yethu ukwazi ukuthi singayisebenzisa yini le nketho. IOS 13 ayihambisani ne-iPhone 5s noma i-iPhone 6 ne-iPhone 6 Plus, ngakho-ke uma unenye yalawa madivayisi, ngeke ukwazi ukuyisebenzisa.
Ngokukhishwa kwe-iOS 13, i-Apple yethule isici esisha esibizwa nge- "Find My Offline", okuyi Izosivumela ukuthi sithole ngaso sonke isikhathi ukuthi ikuphi indawo yedivayisi yethu noma ngabe ingenakho ukuxhumana kwe-inthanethi noma icishiwe ngokuphelele, ngoba ayixhomeki kusiginali ye-GPS noma unxantathu ngamanethiwekhi e-Wi-Fi noma amanethiwekhi weselula, kepha kusekelwe kunketho yephrothokholi ye-Bluetooth Low Energy (BLE).
Ukuze usebenzise lobu buchwepheshe, obutholakale ngezinsimbi ezincane ezibizwa ngamaTiles ebezisemakethe iminyaka engaphezu kwengu-5, kuyadingeka ukuthi okungenani ube namadivayisi amabili ane-iOS 13, noma i-iPhone noma i-iPad ene-iOS 13 ne-Mac ephethwe yi-MacOS Catalina, ngeke sikwazi ukuthola idivayisi yethu uma sinedivayisi ye-Apple kuphela.
Isebenza kanjani i- "Thola Okungaxhunyiwe ku-inthanethi"
Lapho silungisa womabili amadivayisi, yenza okhiye abayimfihlo abiwe phakathi kwalawa madivayisi womabili ngokusebenzisa ukuxhumana ngekhodi. Okulandelayo, kwenziwa ukhiye osesidlangalaleni, obizwa nangokuthi isibani, okuwukuhlonza amadivayisi akho, isibani esidluliselwa nge-bluetooth kwamanye amadivayisi we-iPhone, i-iPad noma iMac endaweni yethu.
Uma sinebhadi lokulahlekelwa noma lokuntshontshwa i-iPhone yethu, wonke ama-iPhones adluliswa eduze nedivayisi yakho bazokwamukela isignali bese besinikeza indawo yedivayisi. Phakathi nayo yonke le nqubo, i-Apple ayikaze ikwazi ukufinyelela nganoma isiphi isikhathi lapho kutholakala khona idivayisi, ngaphezu kwalokho, umsebenzisi onayo kusizile ukuyithola nayo ngeke yazi.
Kuyo yonke le nqubo yokumisa nokusebenza, umsebenzisi akudingeki enze lutho nhlobo. Uma silahlekelwa yidivayisi yethu futhi sifuna ukwazi ukuthi ikuphi, kufanele silandele izinyathelo ezibalulwe ngenhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungayazi kanjani indawo yokugcina ye-iPhone yakho, noma ngabe iphela ngebhethri
UVictor Visier kusho
Sawubona, ngiyabonga ngakho konke okuthunyelwe kwakho, kuyathakazelisa kakhulu, kepha kulokhu kokugcina, mina, one-iPhone 4, angikwazi ukungena ku-Thola i-iPhone yami bese ukhetha okuthi 'Thumela indawo yokugcina'. Ngingakwenza ngenye indlela noma lokhu kungenxa yamadivayisi kuphela ane-iOs angaphezulu kuka-7.1.2?
Phendula uVictor Visier
Sawubona Victor, awukwazi ukuyofuna i-iPhone yami? Ingabe unayo ICloud oyisebenzisile?
UMarga Carrasco Esparza kusho
Kwenzeka into efanayo nakimi ngoVictor. Futhi uma idivayisi icishiwe, awuyitholi nayo, akunjalo?
Phendula uMarga Carrasco Esparza
Cha, uma icishiwe sizokwazi kuphela indawo yokugcina kodwa uma ishintsha, ngeke sikwazi ukwazi indawo entsha ize iphinde ivulwe futhi ixhunywe kunethiwekhi, kungaba yi-3G / 4G noma i-WiFi.
URenato Fernandez S kusho
Kubonakala kimi ukuthi okuzenzakalelayo kuzohlala kukhombisa indawo yokugcina inqobo nje uma ixhunywe kunethiwekhi ye-wi-fi
Phendula uRenato Fernandez S
UFabiana Lemos kusho
Sawubona ubusuku obuhle, ngiyethemba ungangiphendula, namhlanje bengiyisisulu sabaphansi eVenezuela, futhi umakhalekhukhwini wami untshontshiwe, ngizama ukuthola umakhalekhukhwini wami nge-Thola i-iPhone yami, kodwa kungiphonsa umyalezo «cha ukuxhumana », futhi angiboni ukuthi iyiphi indawo yokugcina etholakalayo, uyazi ukuthi ingaba yini? Ngiyabonga kakhulu kusengaphambili
Phendula uFabiana Lemos
Lesi sici sitholakala kuphela nge-iOS 8
Phendula uJavier Martínez
Ngenxa yalomsebenzi ngikwazile ukubuyisa umakhalekhukhwini wami ngemuva kwamahora amabili ngilahlekile 🙂
Isebenzisa ibhethri eliningi?
Ngokuphathelene nebhethri, kimi ngihlala ngisebenzisa indawo, inzuzo futhi akuyona into yokuthi ngine-iPhone 6 plus futhi ibhethri lihlala isikhathi eside ngisebenzisa kakhulu lapho ngifika ekhaya ngemuva kokusebenza no-40% hhayi lapho ngisebenza ngibe no-5 emini bekufanele ngiphinde ngiyikhokhise
Ngilahlekelwe yi-iPhone 4 yami, base beyixhuma kwi-internet bayicisha, bangitshela ukuthi bayivulile kodwa bengingayazi indawo, ngabe ikhona indlela yokwazi ??
Uma uhlelo lokusebenza lungalandwa, alusebenzi?
Kuthiwani, ngilahlekelwe i-iPhone 4s, ine-akhawunti yami ye-iCloud, kepha ibingavinjelwe noma yini, ngiqonde ukuthi ingasetshenziswa, engifuna ukukwazi, ukuthi uma umuntu oyitholile, engasebenzi indawo, mina ngeke besakwazi ukwazi ukuthi likuphi iqembu? ngoba ibonakala kimi ngaphandle kokuxhumeka
Ngilahlekelwe i-iphone 4s yami futhi ngasebenza ukuthi ngithumele indawo yami yokugcina, angazi nje ukuthi kusebenza kanjani lokho. Ngabe ikhona indlela yokwazi noma uma icishiwe, akusenakwenzeka ukwazi? ngicela usize !!!!!!
Mngani omuhle, ngilahlekelwe yi-iPhone yami futhi yangithumelela indawo lapho bevula ifoni kepha ngiyiveza kuphela amahora angama-24 futhi lapho ngibona iposi, amahora angama-24 besekudlulile, ingabe ikhona indlela yokubona leyo ndawo futhi?
Ngilahlekelwe yi-iphone 6 yami futhi uhlelo lokusebenza lusetshenzisiwe ukucinga i-iphone yami kepha alingitshengisi indawo yokugcina lingitshela nje ukuthi inqanyuliwe kwinethiwekhi
Ngilahlekelwe ama-iPhone 6 wami ngokudluliswa okwesikhashana ngisuka emakhaya ami, ngiwasebenzisa kancane futhi lapho sengiyokulanda (izinsuku ezingama-25 noma ezingama-30 kamuva) angikunikeli lokhu. Nge-ipad bese ngifuna i-iPhone yami, yona ingitshela ukuthi ayixhunyiwe ku-inthanethi, Yini engingayenza ukuyibuyisa, ngoba ngiphendukise lezi zindlu ezimbili zibheke phansi futhi aziveli, kufanele ukuthi iphelelwe yibhethri.
UVictor garcia kusho
Ngingayithola kanjani i-iPhone yami uma i-iCloud ingasebenzi, ngicela ungitshele
Phendula uVictor Garcia
ULuis Padilla kusho
Ngilahlekelwe yi-iPhone yami ezinsukwini ezimbalwa ezedlule namuhla, ibhethri alisenayo imali yokukhokha, uma ngikhumbula i-akhawunti yami ye-iCloud futhi ngingathanda ukwazi ukuthi itholakalaphi, kodwa imininingwane ukuthi angikhumbuli ukuthi benginenketho thumela indawo yokugcina eyenziwe yasebenza ... kuzokwazi ukwazi.
UJulian Parra kusho
I-iPhone yami yebiwe, kepha uma ngifuna ukuyisusa, ingicela ikhodi yokuqinisekisa ukuthi, ngokusho komyalezo, ingitshela ukuthi ngiyikhethe esikrinini se-iPhone yami noma kumadivayisi athembekile, ngiyithola kanjani le khodi ? lowo onobuqiniso bezinto eziphindwe kabili
Phendula ku-julian parra
Sawubona, izolo ngilahlekelwe ngumakhalekhukhwini wami we-iPhone futhi ngifaka uhlelo lokusebenza «thola i-iphone yami» futhi livela ngaphandle koxhumano futhi ngiyashayela bese liyacima. Yini engingayenza?
U-Ana Sierra kusho
Bantshontshe i-iphone 6s yami, ngemuva kwezinsuku ezi-4 bayivulile ebusuku, ekuseni ngafaka isaziso sokuthi ngifikile ku-iCloud, kepha le divayisi ayisabonakali. Ingabe bayisusile? Ngabe kuzoba khona yini ithuba lokuthola indawo yokugcina, lapho umyalezo uvele khona?
Phendula u-Ana Sierra
johanna osorio kusho
sawubona ngilahlekelwe yi-iphone 6 angikhumbuli iphasiwedi ye-icloud
Phendula ku-johannna osorio
Yenza isipele i-iPhone yakho nge-AnyTrans
Isizukulwane se-7 iPod touch noma iNintendo Shintsha ukudlala i-Fortnite